Landa uhlelo lokusebenza lwe-Metatrader 4 Mobile, MT4 Mobile Forex Trading
I-MetaTrader 4 Hambayo
Ikhaya / Amapulatifomu / I-Tablet / I-MT4 ye-Android
I-platform ye-MT4 Mobile yokuhweba iyindlela yakho yokuthengisa izimakethe zezezimali, ngisho nalapho usendleleni, ikunikeza ukubuka konke okubalulekile okuhweba okukujabulela ukusebenzisa ku-platform ye-MetaTrader 4 yedeskithophu.
Uhlu lwamathuluzi amaningi wokushada selusondele ukusekela umsebenzi wakho wokuhweba - i-30 yezinkomba zakho zobuchwepheshe ozithandayo, ama-frame ozimele ahlukahlukene kanye nesikhathi sangempela samanani emakethe. Manje yilapho kulula ukwenza amandla kuhlelo lwakho lokuhweba nge-iPhone yakho / iPad / iPod Touch noma i-Android.
Thola ukufinyelela kwe-akhawunti yakho ye-FXCC yokuhweba ezinyathelo ezilula ze-3 - ukulanda, ukufaka nokungena ngemvume kwipulatifomu yokuhweba yeselula usebenzisa iziqinisekiso ze-akhawunti yakho ye-FXCC.
Kumakhalekhukhwini we-MT4 unga:
Xhuma ku-akhawunti yakho yokuhweba kusuka noma yikuphi;
Phatha ukungena kwakho kwamakethe nokuphuma kwamaphuzu ngokubeka, ukulungisa noma ukuvala amathenda;
Faka izinkomba zezobuchwepheshe ze-30;
Faka imali ngokusebenzisa isiteji se-state-of-the-art.